जौबाटै मासु फलेपछि पशुवधको अन्त्य ! - हिमाली पत्रिका	जौबाटै मासु फलेपछि पशुवधको अन्त्य ! - हिमाली पत्रिका
हो, आइसल्यान्डमा वैज्ञानिकहरूले एक प्रकारको कोषबाटै यो अचम्म लाग्ने कुरालाई सावित गर्दैछन् । यस कार्यले अब पर्यावरणलाई जोगाउन मद्धत पुग्नेछ । पशुबाट लिइएको ‘ग्रोथ फ्याक्टर’ जौले बोक्न सक्नेगरी उक्त प्राटिन जौमा मिसाइन्छ र फलेको जौ पिसिन्छ अनि प्रयोगशालामा मासु प्रशोधन गर्न सुरु गरिन्छ ।